Jose Mourinho oo iska indho tiray magaca Cristiano Ronaldo – Gool FM
Jose Mourinho oo iska indho tiray magaca Cristiano Ronaldo
(Yurub) 22 Juun 2020. Tababaraha kooxda kubadda cagta Tottenham Hotspur ee Jose Mourinho ayaa iska indho tiray magaca Cristiano Ronaldo, kaddib markii uu magacaabay magacyada weeraryahanadii ka soo hoos ciyaaray isaga inta uu ku gudi jiro xirfadiisa tababarka.
Jose Mourinho ayaa wareysi uu maanta bixiyay wuxuu ku sheegay:
“Waxaan heystaa weeraryahan la yiraahdo Didier Drogba, wuxuu ila ciyaarayay 4 xilli ciyaareed wuxuuna dhaliyay 186 gool, celcelis ahaan wuxuu dhaliyay 46 gool xilli ciyaareedkiiba”.
Intaas kaddib Mourinho ayaa iska indho tiray inuu xuso magaca Cristiano Ronaldo wuxuuna yiri:
“Kaddib waxaa jiray wiil aan xumeyn, hadda wuxuu ka ciyaaraa kooxda Juventus, wuxuu ku sugnaa kooxdeyda muddo 3 sano ah, wuxuuna dhaliyay 168 gool, celcelis ahaan wuxuu dhaliyay 56 gool xilli ciyaareedkiiba”.
“Waxaa jiray Karim Benzema sidoo kale, muddo saddex sano ah ma uusan u ciyaarin si joogta ah, sababtoo ah wali wuxuu ahaa mid da’ayar ah, inkastoo uu dhaliyay 78 gool, celcelis ahaan wuxuu dhaliyay 26 gool xilli ciyaareedkiiba”.
“Ciyaartoy kale oo la yiraahdo Diego Milito ayaa ila ciyaaray hal xilli ciyaareed gudahiisa kooxda Inter Milan, wuxuuna dhaliyay 30 gool wuxuuna ku guuleystay sedexleyda taariikhiga ah”.
“Waxaa jiray xidig kale oo ila ciyaarayay xilli ciyaareed kala barkiis sababa la xiriira dhaawac soo gaaray wuu dheeraa waxaana loo yaqaanaa Zlatan Ibrahimović, wuxuu dhaliyay 58 gool, celcelis ahaan wuxuu dhaliyay 29 gool xilli ciyaareedkiiba”.
Musiibadii Arsenal waxaa u sabab ah saddex xiddig oo laga helay coronavirus kahor kulankii Man City... (Miyey ka qayb qaateen kulankii Etihad?)
“Ku ciyaarista Camp Nou way ka adag tahay Santiago Bernabéu” – Tababaraha kooxda Athletic Bilbao